Amaara m onye m na-atụ vootu | Martech Zone
Monday, March 26, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
E nwere ya, folks… onye isi oche! Christopher Walken! Nwere ike were echiche nnabata a? Ọ ga-adị mma!
Ikekwe anyị chọrọ obere mgbịrịgba ehi na White House.
Echetara m na ọ bụ nwata ka ọ na-apụ apụ mgbe m na-ele Deer Hunter na abụ m onye ofufe kemgbe ahụ. Echere m na elere m Walken Saturday Night Live ọpụrụiche otu puku ugboro.
PS: Ee, ọ bụ ihe ọchị! Ma na-akpa ọchị. Anọ m na-eme ihe ngosi Walken m kemgbe m hụrụ nke a.
Nke a bụ otu ihe m dere n'abalị a… see okwu si Na-eje ije maka President 2008 ihuakwụkwọ mbụ. Mee ka m mara ma m ga-akwụsị ịde blọgụ ma bụrụ naanị onye Walken impersonator… ma ọ bụ.
[ọdịyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/03/karr_walken.mp3]
Akwụkwọ akụkọ anaghị anwụ anwụ, Na-ere ozi nwụrụ anwụ
Kwa ụbọchị Weekender
Mar 26, 2007 na 9: 36 PM
ahh ọ bụ ọkacha mmasị m .. kemgbe ọ mere vidiyo egwu ahụ .. otu ebe ọ na-agba egwu .. amalitere m ịghọta na ọ bụ onye ọchị ọchị .. ma ọ bụ mgbe ọ mere nke ahụ spoof na SNL .. na 'More cowbell'. , .. nwoke nke mere ka m gbawara!
Mar 27, 2007 na 12: 30 AM
Walken bụ kpochapụwo. Ahuru m nwoke a n'anya. Ihe osise ndị ahụ na SNL ebe ọ na-anwa ịrafu igwefoto (mmadụ) ma na-anwa ime ka ọ nọrọ n'ụlọ ya.
Nice impersonation nke Doug! Definitely gharịrịrị NY twang goin. 😉
Mar 27, 2007 na 5: 59 AM
Daalụ, Tony. Aghaghị m iru n'ime ya. M n'ezie toro na Connecticut ya mere m nwere olu olu ala pat… ruo mgbe m kwagara Vancouver, BC ebe m gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma mee ka m nwee ụkwụ maka ịda ụda dị ka Yankee.
Mgbe ahụ, mgbe m laghachiri steeti ndị ahụ, agbadara m "eh?" na ngwụcha ajụjụ m…
Enwere m ike ịbụ otu n'ime mmadụ ole na ole nwere ike ịkparịta ụka na mmadụ sitere na steeti ọ bụla (ma ọ bụ obodo ọbụla) ma na ngwụcha mkparịta ụka a, m na-eji olu ha agwa.
Mar 27, 2007 na 9: 24 AM
Nke ahụ dị mma n'ebe ahụ Doug…
“Mba, mba, mba… biko la. Elegharala anya na nzuzu, ramblings nke nwoke na-ata ahụhụ, amaja m kwuo, mba… .. Agaghị m ama. My nta anya, anya ọcha DOE. ”
Christopher Walken, Obodo
Mar 27, 2007 na 1: 54 PM
Mar 27, 2007 na 9: 40 AM
Christopher Walken ọ bụ onye ọhụụ Christopher Walken?
O meela ọtụtụ ihe nkiri jọrọ njọ n’ime afọ ole na ole gara aga.
Ahh, ma ọbụna ihe ọjọọ Christopher Walken bụ nnukwu arụmọrụ!